Ihe ị ga -eme ma ọ bụrụ na ezé gị na -agbanwe mgbe ihe nkwado - Ahụike
iphone ihe bụ ọnọdụ ụgbọelu
iphone 5 ihuenyo bụ oji
gịnị kpatara na ekwentị m anaghị ekwe ka m hichapụ foto
ozi iphone 7 adịghị n'usoro
Nkwalite ikuku verizon maka ndị ahịa dị 2016
Ihe ị ga -eme ma ọ bụrụ na ezé gị na -agbanwe mgbe a gwọchara gị (ndụmọdụ)
What Do If Your Teeth Are Shifting After Treatment
Ezé na -alaghachi azụ mgbe nkwado nkwado
Ọzọkwa, ahụ gị na -enwe mgbanwe mgbe niile . Dị nnọọ ka ọkwa elastin na collagen dị na akpụkpọ ahụ anyị na -ebelata ka oge na -aga, na -edugakwa na ndọkpụ, usoro ndị na -echebe ezé anyị ebe ahụ na -enwetakwa ịka nká. Ire na -ebutekwa mgbakasị nkịtị na anya mmiri nke nwere ike imetụta mgbanwe na idobe eze. Ọ bụ ya mere ịtụ anya mmegharị ezé efu ozugbo ewepụrụ ihe nkwado gị abụghị ihe ezi uche dị na ya.
Ihe Mere O Ji Eme
Nke mbụ, buru ụzọ kuo ume. Ezé anyị, ahụ anyị niile, na -agbanwe agbanwe mgbe niile. Orthodontics na -enyere aka ịkwaga ezé gị n'akụkụ ụfọdụ, mana ozugbo ha anọghị ebe ahụ idobe ezé gị n'ọnọdụ ndị akọwapụtara, ihe ndị na -esonụ ga -abata egwu ma nwee ike gbaa ezé gị ume ịkwaga:
Ọ bụrụ na i yighị uwe gị dị ka akwadoro, ọ nwere ike bụrụ na ị ga -ahụ nlọghachi azụ nke orthodontic. Mweghachi azụ na -ezo aka n'ọchịchọ nke ezé ịlaghachi ebe ha nọ tupu ọgwụgwọ orthodontic. Ọbụlagodi na ị hụghị na ezé gị akwagala, ị ga -enwe ike ịkọ ma ọ bụrụ na ị nwere ahụ erughị ala mgbe ị yikwasị ndị na -ejigide gị ọzọ mgbe ogologo oge na -eyighị ha.
Otu esi edozie ya
Ọ bụrụ na ezé gị agbagharị mgbe ọgwụgwọ orthodontic gị gasịrị, ị nwere ike nwee ike idozi ngbanwe ahụ tupu ọ na -akawanye njọ na ndị na -ejigide ihe ọhụrụ. Mgbe ụfọdụ, enwere ike iji Invisalign gwọọ nlọghachi azụ nke orthodontic.
Kpọọ ọfịs Dr gị ozugbo ị hụrụ na ezé gị na -agbanwe, ma ọ bụ ozugbo ihe nkwado ma ọ bụ ọnwa/afọ ole na ole gbadara n'ahịrị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ndị na -ejigide gị adabaghị. Mgbe e leghaara nlọghachi azụ nke orthodontic anya ogologo oge, ọ nwere ike ịdị mkpa ka ịmalitekwa ọgwụgwọ orthodontic siri ike ọzọ. Chọghị oge na mbọ niile ị na -etinye n'ịgbatị ezé gị na mbụ ịla n'iyi!
Mgbe Mgbanwe Ezé Mgbe Braces ghọrọ Nchegbu
Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe dị mma ịnweta ezé ezé gị ozugbo ọgwụgwọ gị zuru oke, mgbanwe dị mkpa ma ọ bụ ịgbanwere ezé n'ihu na -akpata nchegbu. Ọ bụrụ na ị kwenyere na nke a na -eme, ị kwesịrị ịgwa ụlọ ọrụ Dr gị ozugbo.
Dị ka ọ na -adị, ọ bụrụ na Dr hụrụ mgbanwe na -achọghị, obere tweak nwere ike idozi okwu a. Ọ bụrụ na ngbanwe ahụ emeela nwa oge, azịza ya nwere ike ịdị mgbagwoju anya. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị ọrịa nwere ike ịdị na -eyi ihe edoziri anya kwa ụbọchị ruo ọtụtụ ọnwa. Ikpe ndị ka njọ nwere ike ịchọ nkwado nke abụọ, mkpụmkpụ. Ọ bụrụ na onye ọrịa elegharala okwu a anya ruo ọtụtụ afọ, ọ nwere ike ịdị mkpa ịmalitegharị ọgwụgwọ kpamkpam.
Yiri ndị na -ejigide ihe na -esochi ihe nkwado
Ọ bụ ezie na usoro idozi ebumpụta ụwa ka nwere ike ime ka ị hụ ntakịrị nwụnye na -agbagharị agbanyeghị na ị na -eyi onye na -ejigide gị, iji njide ihe bụ ụzọ kacha mma ị ga -esi na -agbaghari ntakịrị ma chekwaa ịta. Ebe ọ bụ na imirikiti ndozi na-eme ozugbo emechara ọgwụgwọ, a na-atụkarị ndị ọrịa ka ha na-eyi ihe njigide ha oge niile maka ọnwa ole na ole mbụ ọgwụgwọ. Ozugbo anyị tụlere ezé gị wee kwado nnabata ha, ị nwere ike nwee ike iyi ihe njide ihe naanị n'abalị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrịa niile ga -eji ihe njide ihe na ndụ ha niile. Dịkarị, iyi ihe njigide abalị ole na ole kwa izu ezuola iji gbochie ezé ịlaghachi n'ọnọdụ mbụ ha. Ịghara iyi onye na -ejigide gị mgbe niile nwere ike bute ọgbaghara n'ọdịnihu.
Ngwa ngwa ị ga -edozi okwu gbasara ịgbagharị ezé ozugbo ewepụrụ ihe nkwado gị, ngwa ngwa enwere ike ijikwa ya. Ọ bụrụ na ị na -echegbu onwe gị na ezé gị na -agbanwe karịa usoro idozi eke, tụlee ịkpọtụrụ omume anyị ozugbo. Ọbụlagodi na ị naghị etinyecha oge niile ka ị na -eyi onye na -ejigide gị oge niile, ọ naghị egbu oge ịlaghachi azụ.
Ndụmọdụ iji gbochie ezé gị ịgbanye mgbe emem nkwado
Ọ bụrụ na ị na -etinye oge niile, mbọ na mmefu nke ị nweta ihe nkwado, mgbe ahụ ihe ikpeazụ ịchọrọ bụ ka ezé gị gbanwee mgbe ihe nkwado gị kwụsịrị. Nke a bụ ihe ikpeazụ Orthodontics chọkwara, yabụ na ha nwere ike mee ike ha niile ka ha kwụsị nke a.
Yiri onye na -elekọta gị mgbe niile
Ụzọ kachasị mfe iji kwụsị ezé gị ka ọ ghara ịgbagharị mgbe ị kwụsịrị ihe nkwado gị bụ iyi ihe njigide gị mgbe niile. Ozugbo ihe nkwado gị kwụsịrị, Dr nwere ike ịmere gị ụfọdụ ihe na -ejigide plastik site na ebu ezé gị. Ndị a na -enye aka idobe ezé gị ebe a na -emepụta ndị na -ejigide gị mgbe niile. A ga -eyi ndị na -ejigide plastik gị oge niile, belụsọ mgbe ị na -eri nri ma ọ bụ na -ata ikikere ezé.
A ga -edozikwa ndị na -ejigide gị oge niile ma ọ bụ wepu ya. Ọ bụrụ na ndị na -ejigide gị dị n'ọnụ gị, mgbe ahụ ị gaghị echegbu onwe gị maka iyi ha maka na ha nọ mgbe niile. Ị ga -eyikwa ihe njide ihe mbughari gị oge niile na mbụ, mana ọ dị gị n'aka icheta idobe ya. Ka oge na -aga, onye na -ahụ maka ọdịdendị gị nwere ike belata nke a ka ọ bụrụ naanị iyi ihe njide gị n'abalị.
Mee ihe ma ọ bụrụ na ị chọpụta na ezé gị na -agagharị
Ọ bụrụ na ị chọpụta na ezé gị na -agagharị, ọ dị mkpa ka ị mee ihe ozugbo. Ezé gị nwere ike na -agagharị maka ọtụtụ ihe kpatara ya, ọbụlagodi na ị na -achọ iyi ihe njide gị dịka i kwesịrị. Ọ bụrụ na ezé amamihe gị na -abata mgbe ewepụrụ ihe nkwado gị, mgbe ahụ, nke a nwere ike ime ka ezé gị niile dịrị n'otu. Ụzọ kacha mma ị ga -esi kwụsị nke a bụ iwepụ ezé amamihe gị ozugbo enwere ike.
Ihe ọzọ kpatara ezé gị nwere ike na -agbanwe bụ n'ihi na onye na -ejigide gị adabaghịzi nke ọma. Nke a nwere ike ịbụ maka na i yighị ya nke ọma ezé gị wee jiri nwayọọ nwayọọ na -agbagharị, ma ọ bụ n'ihi na ọ na -ehulata ma ọ bụ mebie. Ọ bụrụ na ị nwere njigide na -adịgide adịgide, ọ dị mkpa ijide n'aka na waya ahụ ka dị na ọ nweghị njikọ ọ bụla si na ezé gị pụta n'ihi na nke a nwekwara ike ime ka ezé gị pụọ n'ịhazigharị. N'ọnọdụ ọ bụla, ịbanye na orthodontist gị na idobe onye na -ejigide gị, ma ọ bụ ihe njigide ọhụrụ, bụ ụzọ dị mma iji hụ na ezé gị agaghị agagharị ọzọ.
Lezie ezé gị anya
Ọ bụrụ na ị naghị elekọta ezé gị anya nke ọma, mgbe ahụ ha nọ n'ihe ize ndụ nke ire ure. Nretọ a nwere ike rie ezé gị wee mee ka ha mebie. Ọ bụrụ na ọdịdị ezé gị agbanwee, n'ihi ire ere, mgbe ahụ, ezé gị ndị ọzọ nwere ike gbanwee ya. Site na gị na dọkịta ezé gị na -aga na -enyocha ya mgbe niile, ị na -enyere aka hụ na ezé gị na -adị mma, si otú a na -ebelata ohere ezé gị na -agbanwe n'ihi mmebi ma ọ bụ ire ere.
Ịga leta Orthodontics gị oge niile ọnwa isii mbụ ka ewepụsịrị ihe nkwado gị, na kwa afọ ma ọ bụ karịa ka nke ahụ gachara, nwere ike nyere aka hụ na ezé gị dịkwa ebe ha kwesịrị ịdị. Ha ga -enyochakwa onye na -ejigide gị n'oge a wee mee mgbanwe ọ bụla dị mkpa.
Kedu ihe kpatara ezé na -eji emegharị ihe nkwado?
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ezé gị ji agbagharị mgbe ị gbasịrị ihe nkwado. Kwa ụbọchị, ezé gị na -enwe nrụgide dị iche iche. Mgbe ị na -ekwu okwu, ire gị na -arụgide ezé gị ugboro ugboro. Mgbe ị na -ata ata, ezé gị na -enwe nrụgide ugboro ugboro. Ọbụlagodi mgbe ị na -amụmụ ọnụ ọchị, ma ọ bụ mgbe ị na -eloda, akwara dị iche iche n'ọnụ gị na n'ihu gị na -akwagharị. Ka oge na -aga, nke a nwere ike imetụta ọnọdụ ezé gị.
Ewezuga ihe ndị a, ihe dịka ịka nká, ịta ikikere ezé n'ụra gị, na ọbụna mkpụrụ ndụ ihe nketa nwere ike imetụta ọnọdụ ezé gị. Ọ bụ ihe nwute, ezé na -esokarị ụzọ nke obere nguzogide, yabụ ọ bụrụ na ọ nweghị ihe na -ejide ha, ezé gị nwere ike ịkwaga.
Adịghị eyi ihe njide ihe mgbe ihe nkwado
Enwere naanị otu ihe enwere ike ime iji kwụsị ezé ka ọ ghara ịgbanwe - yi ihe njigide gị. O nwere ike ịbụ na orthodontist gị tụrụ aro ka ị na -eyi ihe njigide kwa ụbọchị ruo ọtụtụ ọnwa. Mgbe oge izizi a gasịrị, ikekwe ndị dọkịta ezé gị gwara gị ka ị gaa n'ihu yiwe ya abalị 3 ruo 5 n'izu n'izu ihe karịrị otu afọ. Ụfọdụ ndị dọkịta ezé na -atụ aro na ị ga -eyi ihe njide gị ruo ọtụtụ abalị n'izu maka ndụ .
Ọ bụ ihe nwute, maka ọtụtụ ndị mmadụ, oge agafeela maka nke ahụ. Enwere otu ọgbọ niile nke ndị mmadụ na -eyiri ihe nkwado ọla n'oge afọ iri na ụma ha. Mgbe nhụjuanya nke ụzọ ụgbọ oloko gafere, ihe ikpeazụ onye ntorobịa na-eto eto chọrọ bụ iyi ihe njigide. Mana n'etinyeghị ihe njigide dị ka onye orthodontist gị siri kwuo, ị nwere ike mechaa kwụọ ụgwọ ahụ maka afọ ndị na -abịa.
Na -ejigide ezé na -ejigide ya
Ọ bụrụ na ị ka nwere ndị na -ejigide ochie gị dina n'akụkụ, ị nwere ike ịnwe ọnwụnwa iyi ha iji weghachite ezé gị azụ. Mana nke a abụghị ihe e mere maka ndị na -azụ ahịa. Ọ bụrụ na ezé gị emegharịala nke ukwuu, o doro anya na onye na -ejigide ochie gị agaghị enwe ahụ iru ala iyi. Mana nke ka mkpa, ọ bụrụ na onye njigide ochie gị adabaghị nke ọma, ọ nwere ike imebi ezé gị.
N'ọnọdụ ụfọdụ a na -adịghị ahụkebe, onye na -ahụ maka orthodontist gị nwere ike ikwenye na ị ka nwere ike iji ndị na -ejigide ochie gị. Mana ọ bụrụ na ezé gị akwagharịla n'ụzọ ọ bụla, ọ ga -abụ na ha ga -atụ aro ụdị nkwado ọhụrụ. Yabụ kedu ihe ị ga -eme mgbe ịlaghachi azụ orthodontic?
Jiri Smilelign mee ka ezé gị kwụ ọtọ ọzọ
Ozi ọma ahụ bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ịsapụ ezé gị ọzọ, ọ dị mfe karịa mgbe ọ bụla. Smilelign braces doro anya anaghị ahụkarị anya, ọ zuru oke maka ịhazigharị ezé azụla azụ ka emechara nkwado.
Ị nwere ike ịkwụsị ezé gị ịgbanwere nkwado mgbe ị na -eyi ihe njigide gị oge niile, na -akpọtụrụ Orthodontics gị na akara mbụ nke mmegharị yana hụ na ị na -elekọta ezé gị.
Mgbapu ma ọ bụ Ọkpụkpụ n'azụ ntị gị? - Nke a bụ ihe ọ pụtara?
Ndị a bụ 8 ihe ijuanya na ụbịa na -eme n'ahụ gị
Ụzọ kacha mma esi ehicha ụlọ ezé - ndị na -ehicha ihe ochie PLUS TIPS
MGBE JAW MGBE ỌGWỤGWỌ ỌGWỤ - Chọpụta ihe i kwesịrị ime
Ọbara gbara ọchịchịrị na ezé ndị na -abụghị oghere? - Ihe kpatara,…
Kedu ihe ụra na -eme n'ezie na gị…